တရားတာ,မတရားတာကတော့ န.အ.ဖဘက်နဲ့အတိုက်အခံဘက်က ပြောတာတွေဟာ ကွဲပြားနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် ဦးဇင်းပြောချင်တာက တကယ့်ကို “ကိုယ့်ကိုကိုယ် မှန်တယ်”လို့ ယုံကြည်ရင် အဆိုပါ နှောင်ချိုင့် တွေ၊ လှောင်ချိုင့်တွေ၊ တိုက်ပိတ်တွေ၊ ညစ်ပတ်ပေရေနေတဲ့အခန်းကျဉ်းတွေထဲက အကျဉ်းသားတွေကို အပြင် ကို ထုတ်လိုက်ပါ။ ပြည်သူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရယူပါ။ ဒါဆိုရင် အမှန်က ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
“ဟာ ဦးဇင်းကလဲ ခု ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးလုပ်ပြီးပြီလေ”လို့ ပြောချင်သူတွေရှိနေမှာလဲ အသေအချာပါပဲ။ အဲဒီလို လာပြောရင်တော့ “အော်..ကလေးကလား ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ”လို့ သာသာလေးပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ (ဒါကိုပဲ အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီး ပြောပြောနေကြတာ။ အဲဒီလို ပြောနေတဲ့သူတွေကို ဦးဇင်း ပြောချင်တာက “ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာသိက္ခာကျတယ်ဗျာ”လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ စဉ်းစားညာဏ်လေး၊ ကိုယ်ပိုင်ညာဏ်လေးနည်းနည်းပါးပါးသုံးပြီး ပြောမှပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာက ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေပြောတာကိုလဲ အဟုတ်မှတ်ပြီး အတည်မယူနဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်ညာဏ်နဲ့စဉ်းစားလို့…စသည်ဖြင့် ကာလာမသုတ်မှာ ဟောထားတာ လေ။ ခုတော့..အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး။ အထက်လူကြီးပြောတာ အကုန်အဟုတ်မှတ်၊ နှစ်နဲ့ချီပြီး လိမ်သက်၊ ညာသက်ရင့် သတင်းစာကြီးတွေမှာပါတာ အသေမှတ်……….အင်း….)။
အဲဒီလိုလူတွေအတွက် ဦးဇင်း စာကြောင်းလေး တစ်ကြောင်းထုတ် ပြမယ်။ သေချာဖတ်ကြည့်ကြပါ။
“ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၅၇)အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတ မည်ကဲ့သို့ ကျင့်သုံးသင့်သည်ကို သတင်းစာများ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရဟန်းရှင်လူများပါ ၀က်ဝက်ကွဲအောင် ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြသည်”
အဲဒါက ဟိုယခင်ဥပဒေရေးတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေး။ တော်ဘုရားကလေးရေးတဲ့ “ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော် ဘာသာဖြစ်ရေး”စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဥပဒေတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် အဲဒီလို ဖြစ်နေရမှာ။ ခုတော့………။ (အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ) တစ်ချို့ရွာတွေမှာ ဘာမဲမှ မပေးလိုက်ရဘူး။ မဲပုံးတောင် မမြင်လိုက်ရဘူး။ ကြိုတင်မဲပေးစနစ်ထဲ ပါသွားကြတာ။ (ဒါတွေကို သိပ်အရှည်ကြီး မပြောချင်ပါဘူး)။
အခြေခံဥပဒေတစ်ခုပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာ အဲဒီလို ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆွေးနွေးကြရမှာ။ ကဲ….ခု…ဘယ်လို လုပ်ထား တာလဲ။ စဉ်းစားမှပေါ့။ (ပြည်သူတွေက ဥပဒေအကြောင်းဘာနားလည်လို့လဲ။ ခုဟာက ဥပဒေပညာရှင်တွေ ရေးဆွဲထားတာ)…အဲလိုဆိုချင်သေးတဲ့သူ ရှိနေအုံးမယ်ထင်တယ်။ ရှုထောင့်တစ်ခုလေးကိုပဲ ပြောပြမယ်။
၀ါရင့်နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာတွေထဲမှာ ဥပဒေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေ မရှိလို့ ပြောမလား။ ခုတော့…ဥပဒေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ အပထား “ညောင်နှစ်ပင်”ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သုံးမိရင်တောင် အဲဒီစာရေးဆရာရဲ့ထမင်းအိုးက လှုပ်တုတ်တုတ်ဖြစ်နေပြီ။ ကဗျာဆရာတွေဆို အသိဆုံးပဲ။ “ငှက်”၊ “အမေ”၊ “လှောင်ချိုင့်”၊ “ကောင်းကင်”…..စတဲ့စကားလုံးတွေကိုတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကြီးများ ပြောပါတယ်)။ “ဟ…ဒေါ်စုလွတ်လာပြီး တိုင်းပြည်ပျက်စီးမှာစိုးလို့”လို့ ပြောရင်တော့ ပြည်သူတွေက “………”စား ပြောတောင် မယုံဘူးလို့ ပြန်ပြောခံရလိမ့်မယ်။
သင့်တော်တဲ့အပိုင်းရှိသလို မသင့်တော်တဲ့အပိုင်းတွေလဲ ရှိတယ်လို့ ဦးဇင်း ဖြေချင်တယ်။ မသင့်တော်တဲ့ အပိုင်းက..ကာယိနြေ္ဒပျက်ယွင်းလောက်အောင် လှုပ်ရှားအော်ဟစ်တာဆိုရင် မသင့်တော်ဘူး။
ဘယ်လိုက သင့်တော်သလဲဆိုတာကို ဆက်ဖတ်ရင် သိလိမ့်မယ်။
ကဲ…အဲဒီတော့ စက်တင်ဘာမှာ ဦးဇင်းတို့ မေတ္တာပို့ခဲ့ပုံလေးကို ပြောပြမယ်။ (ပြောပြချင်တာကတော့ အရှည်ကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်အလျဉ်းသင့်လျှင် ဦးဇင်းပြောပြဖြစ်မယ်ထင်တယ်)။
တစ်ရက်က ရန်ကုန်မှာ မိုးတွေကလဲ အရမ်းကို ရွာနေတယ်။ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ အလယ်တောရကျောင်း တိုက်နား လောက်ကနေ ကိုးထပ်ကြီးဘုရားကျော်တဲ့အထိ သံဃာတန်းကြီး။ မေတ္တသုတ်ရွတ်ဖတ်သံတွေ၊ မင်းကွန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အရပ်ရှစ်မျက်နှာ၊ အရပ်ဆယ်မျက်နှာ မေတ္တာပို့သံတွေ…လွှမ်းခြုံလို့နေပါတယ်။ ဦးဇင်းကလဲ အဲဒီအထဲမှာ တစ်ပါးအပါအ၀င်ပါပဲ။ သင်္ကန်းတွေအားလုံး မိုးရေတွေနဲ့စိုရွှဲလို့။ ခိုက်ခိုက်တုန်ချမ်း နေတာပဲ။ “မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ၊ ချမ်းသာကြပါစေ”။ အဲဒီလို….စသည်ဖြင့် မေတ္တာပို့ကြတော့ မျက်ရည်တွေက ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရခဲ့ဘူး။ မိုးရေတွေနဲ့ မျက်ရည်တွေက ရောထွေးလို့။ အဲဒီလို ထွက်တိုင်းထွက်တိုင်း ဦးဇင်း ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုခဲ့ရတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက “သင့်တော်ခြင်း” “မသင့်တော်ခြင်း”။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်လေး (အမှန်အကန်နော်)မှာ ရွံစရာ၊ မုန်းစရာ၊ ကြည့်မကောင်းတာ၊ အမြင်မတော်တာ ဦးဇင်း ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်သူမှ ဘယ်ရဟန်းတော်မှ လုပ်တာလဲ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ကြည့်ရှုသူ ပြည်သူတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ အလှအပလို့မြင်သလား။ ကျက်သရေမရှိ ဘူးလို့ မြင်သလား။ ကဲ……ဒီမြင်ကွင်းကို (ပြည်သူတွေက) တုန့်ပြန်ကြပုံလေးတွေ ကြည့်ရအောင်…………….
၁။ လမ်းဘေးမှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိလောက်အောင် ရှိခိုးဦးတိုက်နေတဲ့ပြည်သူတွေ။
၂။“ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဘုရား၊ အရှင်ဘုရားတို့ ရှိကြီးခိုးပါရဲ့ဘုရား၊ အရှင်ဘုရားတို့ လုပ်ပေးမှ ရတော့မှာပါ ဘုရား၊…………”စသည် စသည် အများကြီး ဟစ်ကြွေးနေတဲ့ပြည်သူတွေ။ မျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့ ပြောနေတဲ့ ပြည်သူတွေ။
၃။ အအေး၊ အဖျော်ရည်၊ ရေသန့်၊ ကွမ်းယာ…..စသည်ဖြင့် ပူဇော်ကန်တော့နေတဲ့ ပြည်သူတွေ။
၄။ လက်ချင်းချိတ်ပြီး ရဟန်းတော်တွေကို စီတန်းကာကွယ်ပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေ။ (ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေ မမြင်ဖူးပေမယ့် ဒီသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာတော့ ရဲတွေက ဆန္ဒပြသူတွေကို ဘေးကနေ ကာရံပြီး လိုက်စောင့်ရှောက် ပေးတာ တွေ့ရတယ်)။
ဒါတွေကို တွေ့ရခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ ရဟန်းတော်တွေ တန်းစီကြွပြီး မေတ္တာပို့နေတာလို့ပဲ မြင် တယ်။ ပြည်သူတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မေတ္တာရပ်ခံပေးနေတာလို့ပဲ မြင်တယ်။ (ရှင်းတယ်နော် ဒကာလေး)။ မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမှုံက ပြောတာနဲ့ ဦးဇင်းပြောတာနဲ့ ဘယ်လိုများ ကွာနေလဲမသိဘူး။ (ဦးဇင်းပြောခဲ့တာ အမှန်တွေဆိုတာကို ဦးဇင်းအသက်နဲ့ အာမခံပြောရဲတယ်)။
နောက်ပိုင်း န.အ.ဖ လုပ်တာလေးတွေ ကြည့်ပါအုံး။ လမ်းပေါ်မှာ ငြိမ်သက်စွာ မေတ္တာပို့တဲ့ရဟန်းတွေကို ညတွေမှာ စစ်ကားအလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ဖမ်းတယ်။ (သူတို့ပြောတာကတော့ အတုတွေပေါ့နော်)။ စာသင်တိုက် တွေမှာ သံဃာအတုနေလို့ မရဘူးဆိုတာ သူတို့ မသိဘူးထင်တယ်။
နောက်….ရေသန့်ဗူးလှူတဲ့သူ၊ အဖျော်လှူတဲ့သူ၊ ကွမ်းယာကပ်တဲ့သူ….။ ရဟန်းတော်တွေဘေးကနေ အေးအေးဆေးဆေးလိုက်ပါသူ….အဲဒီပြည်သူတွေကို အိမ်တွေထိ လိုက်ဖမ်းတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြရုံနဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာ၊ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀၊ ၃၀…စသည် အပြစ်ပေးခံရတာ၊ အကျဉ်းချခံရတာ တိုးတက်လာတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မကြားဖူးပါဘူး။
အရုပ်ဆိုး၊ အကျည်းတန်ဆုံး၊ အသိပညာအမဲ့ဆုံး လုပ်ရပ်တစ်ခုကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက အမျိုးသမီး လုံချည်တွေ၊ အတွင်းခံတွေ၊ ကွန်ဒုံးတွေ….စတာတွေကို စုံထောက်ကြီးဦးစံရှား တရားခံကို မိတဲ့လေသံမျိုး၊ ဂိုက်မျိုးနဲ့ သတင်းစာတွေထဲမှာ အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြခဲ့တာပဲ။ စဉ်းစားညာဏ်ဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာပါ။ ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားအောင် ဦးဇင်း ရှင်းရှင်းပဲ ရှင်းပြပါမယ်။
၁။ နယ်ကလာပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တည်းခိုနေရတဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေဟာ လုံချည်တွေ၊ အတွင်းခံတွေ မပါဘဲ ကျောင်းမှာတည်းရမှာလား။ (ဆွေမျိုး၊ နှမအစ်မတွေရဲ့ အဲဒီပစ္စည်းတွေပြပြီး ဒါဟာ ဘုန်းကြီးတွေဆီက ရတာပါလို့ဆိုတာဟာ……အင်း)။
၂။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တည်းတဲ့ဒကာတွေ၊ ကျောင်းသားတွေဟာ အကုန်လုံး အရိယာတွေမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ထဲမှာ အပျော်အပါး လုပ်တဲ့သူပါမှာပဲ။ အဲဒီလိုလေးကော ထည့်မစဉ်းစားမိဘူးလား။
ဒါဟာ ဘာမဟုတ်တဲ့ ရမ်းသလူးချက်နဲ့ ဘာသာခြားတွေရဲ့အလယ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သိက္ခာချတာ မဟုတ်လို့ ဘာလဲ။ စက်တင်ဘာမှာမှ မဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသမီးအတွင်းခံကတော့ နယ်က ဆွေမျိုးမိဘတွေ ရန်ကုန်ကို အလည်လာနေသရွေ့တော့ တွေ့နေမှာပဲ။ နေ့တိုင်း ကျောင်းသွားယူပြီး သတင်းစာထဲမှာ ထည့်ပါလား။
“အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လွှတ်ပေးရေးအတွက်”ဆိုတဲ့ ထိပေသျှင့်ဆိုသူရဲ့ စကားကတော့ တော်တော်အသိ ညာဏ်နည်းရှာသူရဲ့ စကားလို့ ဦးဇင်းယူဆတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ “ငါ့အမေကို မတရားဖမ်းဆီးထားရင် ငါ ဘယ်လိုနေမလဲ”။ (အဲဒါလေးပဲ စဉ်းစားပါ။ သိပ်အများကြီး မစဉ်းစားပါနဲ့၊ ခေါင်းတွေရှုပ်ပြီး ထပ်မှား ကုန်မှာစိုးလို့ပါ ဒကာလေး။ တကယ်တော့ အဲဒီထက် စဉ်းစားရမှာတွေရှိတယ်)။
“အနာဂတ်သာသနာအတွက် ရင်လေးတယ်”တဲ့။ တယ်လာတဲ့စာပါလား ဒကာလေးရယ်။ စာတွေရှည်ကုန်မှာစိုး လို့ ဦးဇင်း မပြောတော့ဘူး။ ဦးဇင်းပြောချင်တာလေးက……………….
“သာသနာအတွက် ဦးဇင်းတို့ပဲ ရင်လေးပါ့မယ်။ ဒကာလေးလဲ တိုင်းပြည်တာဝန်တွေကလဲ ပိနေတော့ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတော်တွေပဲ အနာဂတ်သာသနာအတွက် ရင်လေးပါ့မယ်၊ ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ အနာဂတ်သာသနာအတွက် ရင်လေးလို့ကိုပဲ စက်တင်ဘာမှာ မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်ခဲ့ ကြတာပါ”
ဒကာလေးရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကို ခြုံငုံမိစေမယ့် စကားတစ်ခွန်းပြောပါ့မယ်။ အဲဒါကတော့………… “မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ လောကကောင်းစားရေးအတွက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ” “သာသနာသုံးရပ်ပြန့်ပွားအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ သာသနာသုံးရပ်ပြန့်ပွားအောင် လုပ်ဆောင်ခိုင်းတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ဒကာလေး ဘယ်လောက်နားလည်သလဲ။ “လောကာနုကမ္ပာယ၊ ဟိတာယ၊ သုခါယ = သတ္တ၀ါတွေကို အစဉ်သနားစောင့် ရှောက်ခြင်းအကျိုးငှါ၊ သတ္တ၀ါအများ အစီးအပွား အလို့ငှါ၊ ချမ်းသာအလို့ငှါ” ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။